Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Moderna CEO: oria ojoo COVID-19 ga-akwụsị n'etiti 2022
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Ajụjụ Ọnụ • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye isi oche nke Moderna, Inc., Stephane Bancel
Ọ bụrụ na i leba anya na mgbasawanye nke ike mmepụta n'ime ụlọ ọrụ n'ime ọnwa isii gara aga, a ga-enwerịrị ọgwụ zuru oke n'etiti afọ na-esote ka onye ọ bụla nọ n'ụwa a wee nwee ike ịgba ọgwụ mgbochi.
Dabere na Stephane Bancel, ọnọdụ COVID-19 ga-emesịa yie nke nwere ọrịa.
A kwadoro ọgwụ mgbochi Moderna COVID-19 n'ihe dị ka mba 100, ebe ọ bụkwa otu n'ime ọgwụ atọ ejiri mee mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi na US.
A ga -enwe mgba maka ọbụlagodi ụmụ ọhụrụ n'oge na -adịghị anya yana ọgwụ mgbochi maka ndị ga -achọ ha.
Stephane Bancel, onye isi ụlọ ọrụ Moderna Inc. Ọrịa coronavirus mechara kwụsị na etiti 19.
Bancel kwuru na N'ajụjụ ọnụ, "Ọ bụrụ n'ileba anya na mgbasawanye nke ike mmepụta n'ime ụlọ ọrụ n'ime ọnwa isii gara aga, a ga-enweta ọgwụ zuru oke n'etiti etiti afọ na-esote ka onye ọ bụla nọ n'ụwa a nwee ike ịgba ọgwụ mgbochi."
Dabere na nnukwu onye isi ala US pharma, a ga -enwe jabs ọbụlagodi maka ụmụ ọhụrụ yana oke ọgwụ maka ndị ga -achọ ha.
Onye na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ọrịa ga -enye onwe ya ọgwụ mgbochi ọrịa n'ihi na ụdị Delta na -efe efe nke ukwuu.
Mgbe a jụrụ ya mgbe mmadụ ga -enwe ike ịpụ na ọrịa ọjọọ, nke hụburu ihe karịrị nde mmadụ 219 butere ọrịa na ihe karịrị nde 4.5 nwụrụ, wee laghachi na ndụ nkịtị, Bancel zara, sị: "Dị ka ọ dị taa, n'ime otu afọ, echere m."
Oge aA kwadoro ọgwụ mgbochi COVID-19 okpukpu abụọ n'ihe dị ka mba 100, ebe ọ bụkwa otu n'ime ọgwụ atọ ejiri mee mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi na US. Jab ahụ na-anya isi arụmọrụ dị elu nke 93% ọnwa isii ka nchịkwa nke ogbugba nke abụọ ya, na-ada ada site na 94.5% nke akọpụtara n'oge usoro ule-ụlọ ọgwụ atọ.
Agbanyeghị, Bancel kwusiri ike na ndị ahụ a gbara ọgwụ ga "enweghị mgbagha" ga -achọ onye na -enye ume n'oge ụfọdụ ka echebe ya pụọ ​​na nje ahụ. O kwuru na ọ na -atụ anya na ndị na -eto eto ga -enweta mgbọ agbam ume otu ugboro n'afọ atọ na ndị okenye - otu ugboro n'afọ.
Oge aIhe nkwalite nwere ọkara ọkara nke ihe na -arụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere ntụtụ mbụ, nke na -enye ụlọ ọrụ ohere ọzọ ịbawanye mmepụta, o kwuru.
“Oke ọgwụ mgbochi ọrịa bụ ihe kacha egbochi mmachi. Site na ọkara ọgwụ ahụ, anyị ga -enwe ijeri ọgwụ atọ dị n'ụwa niile maka afọ na -abịanụ kama ịbụ naanị ijeri abụọ, ” Oge a CEO kọwara.
Moderna so na ndị na-eme ọgwụ mgbochi isii Amnesty International boro ebubo na ọ na -akwalite “nsogbu oke ruru mmadụ nke a na -enwetụbeghị ụdị ya” site na ịjụ isonye na atụmatụ iji bulie ọkọnọ ọgwụ mgbochi ụwa yana ịhọrọ ịkwado mba ndị bara ọgaranya.
Dabere na akụkọ Amnesty International, ụlọ ọrụ US yana ụdị Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca na Novavax bụ ndị kpatara ụta maka na n'ime ijeri 5.76 ijeri a na-enye n'ụwa niile, naanị 0.3% agaala mba ndị na-enweghị ego. .
Nick Eckerling ekwu, sị:
October 3, 2021 na 18: 27
COVID ga -adị